क्याबिन न. ६०७
अस्पताल क्याबिनका सात महिना ।
रुपाको अहिले सातौँ महिना बितरहेको छ ,एउटा अस्पतालको क्याबिन कोठामा । ६०७ नम्बर कोठा । उनको जीवनको अबिस्मणिय अंक हुन्छ शायद । यी उनका संघर्षका दिनहरु हुन् । अस्पताल घरजस्तै महसुस गर्न थालिसकेकी छन् उनले । अस्पतालका सैयासँग अनौठो सम्बन्ध गाँस्न पुगिसकेकी छन् रुपाले । । अनौठो किन भन्दा प्रिय नहुँदा पनि प्रिय हुन पुगेको सम्बन्ध । उनीसँग अरु उपाय पनि त छैन प्रिय नमानी । सधैंजस्तो उनका छालाले स्पर्श गरेका छन् । मायालु हातहरुको मात्र हैन ।स्प्रिटको चिसो स्पर्श र सुइको तीखो घोचाइ पनि छन् । औषधी दिन र रगत जाँच गर्न अनगिन्ती स्पर्शहरु । सुइ दिने सिस्टर र डाक्टर त मायालु नै मान्छिन् । सुइको तिखोपनालाई दोष दिन्छिन् । कुनै सुइ सिधै नशामा, कुनै मासुमा त कुनै छालामा । सयौँ सुइहरु परिसकेहोलान् । कति त ढाडमा पनि । नसा नभेटिँदा धेरै पटक घोच्नुपरेको पनि छ । त्यसको खलपात्र घोच्ने ब्यक्ति हो कि सुइ हो । वा आफ्नै शरीर भन्ने कुरामा अन्योल मान्छिन् रुपा । जे होस् म पनि कहिलेकसो उनको सुइको कथाको एउटा खलपात्र हुन पुगेको छु ।
सलाइनका बोत्तल कति सकिए । केही पत्तो छैन । सुरु सुरुमा हिसाब राख्ने गर्थिन् । तर अचेल यतिका महिनासम्म त गणितिय गिन्तिको के अर्थ होला र ! सलाइनको थोपाको रफ्तार कहिले छिटो त कहिले ढिलो । एकनासको रफ्तारमा दिन नमिल्ने । उस्तै उनको जीवनको रफ्तार पनि । कहिले सुस्त अनुभव त कहिले द्रुत । शरीर तंग्रिदाको समय हर्ष हुने । खस्किँदा सिथिल हुने । जीवनका आशाहरु निरासामा परिणत हुने गर्छन् । सपनाहरु भत्किने एकै क्षणमा । आफ्नो प्राणवायुको साक्षात्कार उनलाई धेरै पटक भएको छ । । उनी भित्रको रोग समयसमयमा जिस्किरहन्छ । ठट्टा गरिरहन्छ । लाज पनि मान्दैन । अस्ति भर्खर थला पार्ने गरी घायल गरेको । फेरी घायल गर्न खोज्छ । उनको मनमात्र घायल नभएको हो । मन घायल भए त के आशाले अडिने थिन् र रुपा यो संसारमा ?
रुपाको रोगलाई किन डरलाग्दो भनेको होलान् त ! उपचारमा असिम धैर्यता चाहिने । कुनै एकीन टुङो नभएको । खर्च पनि उस्तै धेरै । उतारचढाव पनि धेरै भएर होला । कुनै दिन त इहलीला सकिने नै छ । भगवानले मनुष्यजातिबाट लुकाएको कुरा त्यही हो । कहिले अन्तिम क्षण भन्ने थाहा नहुने । आज भोलि पर्सी कुनै दिन त अवस्य हो । मिति थाहा नभएकोले अजर अम्मर हो कि भन्ने भ्रम पर्ने त हो । कन्सिरी फुल्ने दिन हो कि जुङाको रेखी आउने दिन । भर्खर बैस चड्दा हो कि कुप्री परेर चाउरी परेपछि । कसैलाई केही पत्तो त छैन । त्यही रहस्यको गुदी नपाएर सुखसयल त्यागेर सिद्धार्थ ज्ञानको खोजिमा निस्किएथे रे । त्यो बोधिसत्व ज्ञान त रुपालाई सोधे पनि थाहा हुन्छ होला !
बुद्धत्व जे जस्तो जिनिस भएपनि संसार एउटा भ्रम नै हो । हुन त सबैको जीवनको आयु क्षण क्षण गर्दै घट्छ नै । तर त्यसको आभास सबैलाई हुँदैन । कुनै एउटा निहुँले एक दिन त छोड्नु नै पर्छ । फरक यति मात्र छ कि रुपाको अगाडि एउटा निहुँ छ । उनका अनुशासनहीन रक्तकोषिकाहरु । किन म्युटेसन भयो केही थाहा छैन । केही कसैको बिगार कहिल्यै गरेको जस्तो त लाग्दैन रुपालाई । त्यसैले त उनलाई यो धर्म ,पाप ,पून्य, स्वर्ग, नर्क आदि कुरा बनाइएका कुरा हुन् जस्तो लाग्छ । आँफैसँग प्रश्न सोध्छिन् ,” मलाई नै किन ? “ मैले आजसम्म उत्तर दिन नसकेको एउटै प्रश्न हो त्यो । शायद देवताहरुको मिटिङमा गोलाप्रथा गरेर रोग भिडाइने रहेछ कि ! प्रारब्धलाई कारक मानेर उत्तर दिएर के गर्नु? मन सन्तोष गर्ने उत्तर मात्रै त हो । सामान्य ब्यक्तिले नदेखेको नबुझेको कुरा न हो । त्यसको स्पष्ट उत्तर हुँदो हो त सबै बुद्ध हुन्थे !
उनका शरीर भित्रका रक्तकोशीकाहरु बहुलठ्हिपन गर्छन् रे। सेतो रक्तकोष (wbc )घटेर निकै दु:ख दिन्छन् । मिलोमतो गरेर होला । ति कोषिकाको सँख्या एकै पटक घट्छन् त कहिले बढ्छन । खेलाँची गर्छन् । अनि रुपालाई रोगसँग लड्न गर्हो पर्छ । फेरी सुइ लगाइन्छ उनका शरीरमा ति कोशीकाको फौज तयार गर्न । केही दिनमा फेरि उनी तङ्रिन्छिन । उनको रोग नै उस्तै दु:ख दिने । रगतको क्यान्सरको रोग । त्यसैले त रक्त कोशीकाहरु अनुशासनहिन भएका छन् । आफ्नो मनमर्जिमा चलेका निर्लज्ज कोशीकाहरु दौडिरहेका छन् उनका नशाहरुमा । खर्चिलो भएपनि “ केमो” दिएर रोक्ने प्रयास निरन्तर जारी छ । जीवन आशा र प्रयासको मिलन त हो । जिउने आशा र जिउने प्रयास । जीवन मृत्‍यु त हाम्रो हातमा नहुने भन्छन् । के प्रयास नै नगर्ने त !
कपाल पनि झर्दै पलाउँदै गर्छ शिशिर बसन्त रितुका पातजस्तै । तर कपाल पलाउँदैमा उनको जीवनमा बसन्त भने आउँदैन । वाकवाकी पनि कती सारो । खाना पनि नरुच्ने । बिष हो कि औषधी भन्ने कुरामै मनले प्रश्न गर्छ विवस भएर । कुनै कुराको अंमल नपरेको शरीरमा किन यसरी उनका रक्त कोशीकाहरु बहुलाएका होलान् त ? के अंमल सेवन गर्नेहरुमा त्यही अंमलको डरले अनुशासित हुने हुन र ? बेलाबेलामा सोचमग्न हुन्छिन् रुपा । उनको १२ कक्षा पढेपछि गर्ने भनेर बुनिएका सपनाहरु पूरा गर्न सक्छिन् होला त ? उपचारमा आशा भने छ । तर कहिलेकसो आत्तिन्छिन् । उनको मुटुको गति बेजोड दौडिन्छ । निद्रा पनि लाग्दैन । डर लाग्छ संसार छोडिने हो कि भनेर । जीवनबोधको एउटा सानो उत्कृष्ट नमूना ।
क्याबिनका सात महिना कटिरहेका छन् । कहिले रुँदै त कहिले हाँस्दै । आँसु मात्र नदेखिएका हुन । पिर त गहिरो छ । नाप्न धेरै मुस्किल छ बाहिर देख्नेलाई । त्यो दु:ख नाप्ने असफल प्रयास मात्रै हुनेछ । सम्पन्नताले क्याबिनको बसाइ बसेकी हैनन् रुपा । रक्तकोशीकाहरुले साथ नदिएर पो हो । कमजोर शरीरले रोगसँग लड्न नसकेर हो । इन्फेक्सनबाट जोगिनका निम्ती हो ।
औषधीमा निकै पैसा पर्छ । । “केमोको” औषधी पुर्याउन सितिमिती नसकिने । त्यसैले त केमोको हरेक थोपा औषधी अनमोल लाग्छ मलाई । कहिलेकाँही उनले सोध्ने गर्छिन् ” डाक्टर शम्भु । मेरो औषधी किन यति बिधि महँगो ? “. मसँग उनलाई चित्त बुझ्ने उत्तर कहिल्यै हुँदैन । तर म उत्तरको लागि मात्रै भन्छु ,“ अप्ठेरो रोग भनेर जति पनि तिर्छन् भनेर औषधीको भाउ बढाएका होलान् है रुपा । “. उनले भन्छिन् “सुगर र प्रेसरको औषधी जस्तै सहज र सस्तो बनाइदिए जाति हुन्थो नि । सुगर प्रेसर जस्तै घरघरमा घुस्नुपर्ने हो र मेरो रोग ! “. उनले कसैलाई पनि यस्तो रोग नलागोस् भनेर प्रार्थना गर्छिन् सधैं ।
अस्पतालको सैयामा पुगेपछि एउटा तत्वज्ञान खुल्दो रहेछ । मन सङ्लिँदै जाने रहेछ । जीवन आशाहरुको मृगत्रीष्णा हो । जिउने आशाको मृगत्रिष्णा । त्यही मृगत्रिष्णालाई सत्कर्मले रङिन बनाउने नै जीवन जिउने कला रहेछ । स्टेव जब्सका अन्तिम दिब्यबाणिहरु सबैले थाहा पाए । उपेन्द्र देवकोटाको अन्तिम घडीतिर खुलेको ज्ञान पनि सुने सबैले । तर रुपाको कथा कतै चर्चामा आएन । हरेक जीवन एउटा कथा रहेछ । केही कथित त धेरै अकथित । सामान्य जीवनमा बिशिष्टता खोज्न सकिने रहेछ । त्यसैले त भन्छु मैले स्टिव जब्स र देवकोटा हरेक दिन देखिरहेको हुन्छु । रुपा त एउटा प्रतिनिधिपात्र मात्र हो । रुपाजस्तै सुरज, कीर्तिका आदि नामका क्यान्सरदर्शीहरु यी क्याबिनमा संघर्षका समय ब्यतित गरिरहन्छन् । र म सबैको जीवनको मर्म थोरै भएपनि अनुभुती गर्ने प्रयास गर्दछु ।
एक रक्तक्यान्सरदर्शीको मनको आवाजलाई शब्दमा ब्यक्त गर्ने असफल प्रयास गर्दै छु । धन्यवाद ।
Dr Laxmi Panthy April 13, 2020 at 6:13 AM
बिचरा।🙏🙏 The Voice of Painful soul. 👍️👍️👍️